Sorry Somalia 191aad, Spain 1aad Waa Qiimeynta Darajooyonka Fifa Ee Bishan July
Dalkeena Somalia ayaa galay qiimeynta bishan July kaalinta 191-aad isagoo waxbo aan iska badalin bishii hore oo uu ku jiray isla kaalintas.
Sidoo kale Somalia waxay qiimeynta bishan ee qaaradda Afrika ka gashay kaalinta 50-aad waxaana ay ku jirtaa afarta dal ee ugu qiimo hooseya waxana kasii dambeeya dalalka Mauritius,Jabuuti iyo Mauritania.
Dhanka qaaradda Afrika ee Qiimeynta xulalka ugu wanaagsan caalamka waxaa ugu sareeya Ivory Coast oo soo galay 20-ka dal ee ugu sareeya waxana uu ku jirta kaalinta 16-aad.
Kadib markii xulka England uu kaalin wanaagsan ka galay tartanka koobka qaramada yurub ayaa wuxuu soo galay kaalinta 4-aad heerka kala horeeynta xulalka adduunka.
Xulka ah horyaalka adduunka ee spain ayaa walli ku jira kaalintiisa 1-aad kadib markii ay finalaha 4-0 kaga badiyeen Talyaaniga.
Dalka marti galinaya koobka adduunka 2014 ee Braziil ayaa markii ugu horeysay hoos ugu dhacday 10-ka kaalin ee ugu hooseeya iyadoo lumisay oo hoos u dhacday shan darajo.
Dalka Wales ayaa ku jira kaalinta 38-aad halka Scotland uu galay 49-aad waxana ay hoos u dhacday 8 darajo halka Waqooyga Ireland uu galay kaalinta 102-aad.
Jamhuuriyadda Ireland ayaa laga badiyay dhamaan saddexdii ciyaarood ee koobka Euro 2012 ayaa hoos u dhac ilaa 8 darajo sameeyay wuxuuna galay kaalinta 26-aad isagoo qiimeyntii hore ku jiray kaalinta 18-aad.
Labada dal ee looga badiyay Seme Finalka koobka Euro2012 Germany iyo Portugal ayaa sameeyay kor u kac,Germany aya galay kaalinta 2-aad halka Portugal uu galay kaalinta 5-aad.
20-ka dal ee ugu sareysa qiimeynta Fifa.
Dalkeena Somalia ayaa galay qiimeynta bishan July kaalinta 191-aad isagoo waxbo aan iska badalin bishii hore oo uu ku jiray isla kaalintas.Sidoo kale Somalia waxay qiimeynta bishan ee qaaradda Afrika ka gashay kaalinta 50-aad waxaana ay ku jirtaa afarta dal ee ugu qiimo hooseya waxana kasii dambeeya dalalka Mauritius,Jabuuti iyo Mauritania.Dhanka qaaradda Afrika ee Qiimeynta xulalka ugu wanaagsan caalamka waxaa ugu sareeya Ivory Coast oo soo galay 20-ka dal ee ugu sareeya waxana uu ku jirta kaalinta 16-aad.Kadib markii xulka England uu kaalin wanaagsan ka galay tartanka koobka qaramada yurub ayaa wuxuu soo galay kaalinta 4-aad heerka kala horeeynta xulalka adduunka.Xulka ah horyaalka adduunka ee spain ayaa walli ku jira kaalintiisa 1-aad kadib markii ay finalaha 4-0 kaga badiyeen Talyaaniga.Dalka marti galinaya koobka adduunka 2014 ee Braziil ayaa markii ugu horeysay hoos ugu dhacday 10-ka kaalin ee ugu hooseeya iyadoo lumisay oo hoos u dhacday shan darajo.Dalka Wales ayaa ku jira kaalinta 38-aad halka Scotland uu galay 49-aad waxana ay hoos u dhacday 8 darajo halka Waqooyga Ireland uu galay kaalinta 102-aad.Jamhuuriyadda Ireland ayaa laga badiyay dhamaan saddexdii ciyaarood ee koobka Euro 2012 ayaa hoos u dhac ilaa 8 darajo sameeyay wuxuuna galay kaalinta 26-aad isagoo qiimeyntii hore ku jiray kaalinta 18-aad.Labada dal ee looga badiyay Seme Finalka koobka Euro2012 Germany iyo Portugal ayaa sameeyay kor u kac,Germany aya galay kaalinta 2-aad halka Portugal uu galay kaalinta 5-aad.20-ka dal ee ugu sareysa qiimeynta Fifa. 1. Spain
7. Argentina 8. Netherlands 9. Croatia 10. Denmark
12. Greece 13. Russia 14. France
15. Chile 16. Ivory Coast
18. Czech Republic 19. Mexico
Mogadisho / Somalia	Latest News